Labo dumar soomaali ah: Qaniinyo ayay farta kaga goysay: Sanad xabsi ah iyo magdhow ayaa lagu xukumay. - NorSom News
Labo dumar soomaali ah: Qaniinyo ayay farta kaga goysay: Sanad xabsi ah iyo magdhow ayaa lagu xukumay.
Maxkamada magaalada Asker ayaa haweenay soomaali ah oo 53 sano jir ah ku xukuntay sanad xabsi ah, iyo 75.000 kr oo magdhow ah, kadib markii lagu helay inay qaniinyo farta uga goysay haweenay 38-sano jir soomaali ah ah oo ay ninkeeda uga shakisay inuu la sheekeysto.
Falkan ayaa bishii February ee sanadkan 2020 ka dhacay gudaha masaajidka soomaalida ee Tawfiiq. Waxeyna haweeneyda xabsiga lagu xukumay sheegtay in haweeneyda ay qaniintay ay uga shakisay inay la sheekeysto, xiriirna ay la leedahay ninkeeda, kadib markii ay aragtay xiriir ay ka wada sameeyeen khadka telefoonka.
Haweeneyda dhibanaha ah ee la qaniinay ayaa maxkamada ka sheegtay inay haweeneyda 53-sano jirka ah ee la xukumay ay u sharaxday in wax xiriir ah uusan kala dhaxeyn ninka la sheegay in la sheekeysato. Ayna isku deyday in haweeneyda kale ay u sharaxdo arintaas, ayna ku heshiiyeen inay arintaas meel iska dhigaan, maalmo kahor inta aysan masaajidka isugu imaan.
Booliska Oslo ayaa sheegay in masaajidka soomaalida ee Tawfiiq ay ugu tageen haweeneyda 38-jirka ah oo dhiig-baxeyso, kadib markii qeybta kore ee mid kamid ah faraheeda looga gooyay qaniinyo. Iyaga oo sheegay inay waqti qaadatay in la helo qeybta kore ee farta qaniinyada laga gooyay haweeneyda dhibanaha ah.
Maxkamada Asker marka ay dhageysatay cadeymaha iyo markhaatiyaasha ka marag-furay maxkamada, haweeneyda 53-jirka ah ku xukuntay hal sano oo xabsi ah, iyo magdhow 75.000 kr. Waxaana sidoo kale lagu xukumay inay bixiso qarashka ku baxay dhageysiga maxkamada oo gaaraya 12.000 kr.
Xigasho/kilde: Kvinne (53) dømt til fengsel i ett år for å ha bitt av lillefingeren til kvinne i moské.
Previous articleAkhri-Document: Gobolka Oslo oo go´aan kasoo saaray kiiska masaajidka Tawfiiq.
Next articleDhacdo ugub ah: UNE oo nin u dhashay Poland siisay magangalyo qoxootinimo